July 2014 | OKKALA STORE
OKKALANET တွင် update video,music, ph app များရှာရန်အတွက်သာဖြစ်ပါသည်
Romansan Milestone 13 DVD ALBUM
SHWE FM4Anniversary DVD Album
Chelsea ကစားသမားသစ် ဖာဘရီဂက်စ် ပထမဆုံးဂိုးစသွင်းတဲ...
အိမ်အိုဟောင်းကြီး အတွင်းက မယုံနိုင်ဖွယ် တွေ့ရှိမှု
★★ PC Cleaner Pro 2014 12.9.14.7.23 + Key ★★
Transformers: Age of Extinction (2014) - Full Mov...
The Expendables3(2014) - Sylvester Stallone Mov...
Temple Castle Runအားလုံးပဲ မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ .........
Olympiakos3-0AC Milan ( International Friendly...
Journey to the West : Conquering the Demons(2013) ...
ခင်ရူပါ ရဲ့ အလန်းလွန် တဲ့ အနီးကပ်ရိုက်ချက်များ
Darr @ the Mall Full Movie
La Galaxy0-7Manchester United ( Friendly Cup )...
우는 남자 (No Tears for the Dead) (2014) Full Movie
[Full HD] (인간중독) Obsessed, (2014 예고편) - Korean Mov...
Oculus Official Full Movie HD
“အစ္စရေးတို့၏ Iron Dome “သံကွန်ချာအမိုး” ဒုံးခွင်း...
ဒါကတော့ နာမည်ကြီး All of Me ဆိုတဲ့ သီချင်းပါ။ Joh...
နောက်ဆုံးထွက် မြန်မာ ဗီဒီယို ဇာတ်ကားသစ်
ယနေ့ထွက် မြန်မာ ဗီဒီယို ဇာတ်ကားသစ်
ဈေးကောင်းရတဲ့ အုန်းဆီ အလွယ်တကူလုပ်နည်း…… အများအ...
မြန်မာပြည်မှာ သရဲကား ကြည့်ပြီး ရယ်နိုင်ပါပြီ XD he...
၉ နှစ်သားနဲ့ ၆၂ နှစ်သူတို့ရဲ့ ဒုတိယမြောက် မင်္ဂလာလက...
♪ 18+ Sexy App , Game , Movie များကို Free ရယူနိုင...
ဒီ Android APK အား 18 နှစ်ပြည့် ပြီးသူများသာ ဒေါင်...
အာဇာနည်ခေါင်းဆောင်တွေကျဆုံးခဲ့ချိန် င်္နနက် ၁၀း၃၇ မှ...
MH 17 လေယာဉ် ပျက်မကျခင် နောက်ဆုံး မြင်ကွင်း ရုပ်သံ...
Love Lesson(2013) English စာတန်းထိုး
GODS AND KINGS [Official Teaser Trailer in HD]
ဖင်ယားမှု အာမခံမရှိဘူးဆိုတာ ဒါကိုပြောတာ :P
မလေးရှားနိုင်ငံက MH17 လေယာဉ် မနေ့ညက ယူကရိန်းမှာ ပစ...
နောက်ဆုံးထွက် မြန်မာ ဇာတ်ကားသစ် အချစ်၏ ဖြားယောင်းေ...
ယနေ့ထွက် မြန်မာ ဇာတ်ကား ပုစ္ဆာ ဆန်သော တစ္ဆေမလေ;( နေမ...
နောက်ဆုံးထွက် မြန်မာကားသစ် ( ၁၂ နာရီ သတို့သား ) နေ...
ယနေ့ထွက် မြန်မာ ဇာတ်ကား ငါရဲ့နင် ( အောင်ရဲလင်း + သ...
နောက်ဆုံးထွက် မြန်မာကားသစ် မိတကွဲ ဖတကွဲ ( လူမင်း +...
နောက်ဆုံးထွက် မြန်မာ ဇာတ်ကား အဖေ့စကား ( မြင့်မြတ် ...
နောက်ဆုံးထွက်မြန်မာ ကားသစ် အဆိပ်ငွေကြေး ( ကောင်ြး...
ယနေ့ထွက် မြန်မာဇာတ်ကားသစ် ( ရည်းစားဦး ကျိန်စာ) နေ...
နောက်ဆုံးထွက် မြန်မာ ဇာတ်ကားသစ် ဂျင်ဂျင်လည်( အောင်...
ယနေ့ထွက် မြန်မာကားသစ် ချစ်တယ် မုန်းတယ် ၁၅၀၀ ဖုန်းရ...
Project X (2012) မြန်မာစာတန်းထိုး
MC Zay YE - EP (2014) mini album ၀၁။ လိုက်ရဲလား...
We Are Big Bag ကျားပေါက် (2014)New Mini Album
ဝေလ မိတ်ကပ်မကြိုက်သော သီချင်းများ (2014)
နီနီခင်ဇော် ( မာရီယို - MTV Album )
နောက်ဆုံးထွက် မြန်မာ ဇာတ်ကား
Gymသွားမဆော့ပဲ အိမ်မှာပဲ ကိရိယာလွတ်ကစားချင်သူများအ...
မြန်မာ စပါးကြီးမြွေခေါ် ကချင်သားလေး အောင်လဆိုင်းနဲ့...
အုန်းရည်ထုတ်နည်း အုန်းသီးကို မခွဲပဲ အုန်းရည် ထုတ...
မိစန္ဒီ ပစ်တိုင်းထောင် CD - New Album
Album တခုလုံးကို okkala music video များထဲက myanmar mtv သီချင်းများထဲတွင် ၀င်ရောက်နားဆင်နိုင်ပါပြီ
အခုတော့ ဒီခွေထဲက နာမည်ကြီးသီချင်းတပုဒ်ကို တင်ပေးလိုက်ပါတယ်
တေးဆို နိုင်းဝမ်း နီနီခင်ဇော်
Posted by okkala net at 11:11 PM No comments: Links to this post
တေးဆို ဝေလေ ဂျောက်ဂျက် ကျော်ထွဋ်ဆွေ
Posted by okkala net at 10:40 PM No comments: Links to this post
Chelsea ကစားသမားသစ် ဖာဘရီဂက်စ် ပထမဆုံးဂိုးစသွင်းတဲ့ Vitesse 1 -3Chelsea (Highlight)
Posted by okkala net at 11:05 PM No comments: Links to this post
အိမ်အိုအိမ်ဟောင်းကြီးတလုံးက ရွှေတွင်းကြီးတခုအဖြစ် ကံအလွန်ကောင်းသူ အမျိုးသား တဦး အတွက်
ဒီဖြစ်ရပ်က အင်တာနက်မှာ ဖော်ပြခဲ့တာ ကြာပြီဖြစ်ပေမယ့် တကယ့်ကို ထူးဆန်းတဲ့ ရှာဖွေတွေ့ရှိမှုလို့ ပြော ရ မလားပါဘဲ။
လူတယောက်က သူနဲ့ သူ့ဇနီး တို့အတွက် အပန်းဖြေအနားယူဖို့ ပေါ်တူဂီနိုင်ငံက လယ်တော အိမ်တလုံးကို ဝယ်ခဲ့တယ်။ အိမ်ကြီးမှာလည်း သော့ခတ်ထားရုံသာမက သံဂဟေတွေနဲ့ပိတ်ထားတဲ့ ဂိုဒေါင်ကြီးတခုက တွဲလျှက်ပါတယ်။
ကံကောင်းချင်တော့ အဲဒီ လယ်တောအိမ်ကြီးကို တကယ့်ကို မထင်မှတ်တဲ့ ဈေးချိုချိုနဲ့ ဝယ်ခဲ့တာလို့ ဆိုတယ်။
ဒါနဲ့ အိမ်ကြီးကို ဝယ်ပြီးလို့ ၁၅ နှစ်ကျော်ကြား သော့ခတ်ပြီး သံ ဂဟေ ဆက်ပိတ်ထားတဲ့ ဂိုဒေါင်ကို ဖွင့်လိုက် တဲ့အခါ….
အိမ်ကြီးရှင်ဖြစ်လာသူက မယုံနိုင်လောက်အောင် ဖြစ်သွားခဲ့ရပြီး အရမ်းကို ပျော်သွားတယ်။
ဂိုဒေါင်ကြီးထဲမှာ တွေ့လိုက်ရတာက တကယ့် နာမည်ကြီး Aston Martins၊ Mercedes နဲ့ မော်ဒယ်မျိုးစုံ Lotus ရှေးဟောင်း တန်ဘိုးကြီး ကားတွေ ဖြစ်ပါတယ်။
ရှေးဟောင်း ရှားပါး တန်ဘိုးကြီး ကား အစီရေပေါင်း ၁၈၀ ကျော်ကို ဂိုဒေါင်ထဲမှာ တွေ့ရပြီး ကားတွေက လည်း ဖုန်အလိမ်းလိမ်း တက်နေတယ်။ ကား တော်တော်များများကတော့ လမ်းပေါ် မောင်းလို့ ရတယ်။
ဒီရှေးဟောင်း တန်ဘိုးကြီး ကားတွေကို လေလံပစ်လိုက်မယ်ဆိုရင် ဗြိတိန်စတာလင်ပေါင် သန်းပေါင်းများ စွာ ရမှာ သေချာ တယ် လို့ ဆိုတယ်။
မူရင်း အိမ်ပိုင်ရှင်ဟာ ရှေးဟောင်း ကား ကောင်းတွေကို စုဆောင်းသူ တဦးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ အမွေ ဆက်ခံ သူ မရှိလို အခုလို ဂိုဒေါင်ကြီးထဲ ဘာရှိမှန်းမသိဘဲ အဲဒီ အိမ်ကြီးကို လက်ဝယ်ရှိသူက ရောင်းလိုက်တာဖြစ်ပါ လိမ့်မယ်။
ဝယ်သူသွားသူ ပိုင်ရှင်သစ်ကတော့ ဒီကားတွေနဲ့တင် စတာလင်ပေါင် သန်းပေါင်းများစွာ ချမ်းသာသွားပါပြီ။ ဂိုဒေါင်ကြီးထဲကို တချက်လောက် ဝင်ကြည့်လို့ရပါတယ်။ အောက်က ဗွီဒီယိုကို ကြည့်လိုက်ပါ။
Posted by okkala net at 10:36 PM No comments: Links to this post
မိမိဖုန်းကိုနှေးကွေးလေးလံအောင်ပြုလုပ်နေတဲ့ junk App တွေနဲ့ cache တွေကိုရှင်းလင်းပေးနိုင်တဲ့အပြင်
download folders, browser history, clipboard content တို့မှမလိုအပ်တာတွေကိုလည်းရှင်းလင်းပေး
ပါတယ်။battery levels နဲ့ temperature ကိုလည်းထိန်းပေးနိုင်သည့်အပြင်မလိုအပ်တာတွေရှင်းလင်း
ပေးတဲ့အတွက် RAM and internal storage ကိုပိုပြီးအားကောင်းမြန်ဆန်အောင်ကူညီပေးပါတယ်။
ဒီကောင်လေးကို Android 4.0 နှင့်အထက်မှာအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
Posted by okkala net at 4:41 AM No comments: Links to this post
Transformers: Age of Extinction (2014) - Full Movie
မြန်မာ စာတန်းထိုး full movie ကို okkala နိုင်ငံခြား ဗီဒီယို ဇာတ်ကားများထဲတွင် ၀င်ရောက်ကြည့်ရှု့နိုင်ပါသည်
ဒီဆိုက်သည် ကျွန်တော်တို့ OKKALA အင်တာနက်ဆိုင်တွင်တင်ထားသော Movie ,
Ebook, Ph software app , Game များကို အလွယ်တကူ
Posted by okkala net at 2:08 AM No comments: Links to this post
The Expendables3(2014) - Sylvester Stallone Movie Full HD Movie
Full Movie ကို okkala နိုင်ငံခြား ဗီဒီယို ဇာတ်ကားများထဲတွင် ၀င်ရောက်ကြည့်ရှု့နိုင်ပါသည်
Posted by okkala net at 2:02 AM No comments: Links to this post
အားလုံးပဲ မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ ............................
ဒါလေးကတော့ Temple Castle Run အသစ်ထွက်လာတဲ့
Game လေးတစ်ခုပါ Temple Run ချစ်သူများအတွက်
ရုပ်ထွက်ကောင်းကောင်းနဲ့ ပိုပြီးခက်လာတဲ့ Game လေးပါ
Download Here http://www67.zippyshare.com/v/96516088/file.html
Posted by okkala net at 10:51 PM No comments: Links to this post
Olympiakos3-0AC Milan ( International Friendly Match Full Highlight )
Posted by okkala net at 1:46 AM No comments: Links to this post
Journey to the West : Conquering the Demons(2013) မြန်မာစာတန်းထိုး
ဇာတ်ကားအမည် ၊ Journey to the West: Conquering the Demons
ဒါရိုက်တာအမည် ၊ Stephen Chow, Derek Wok
အရည်အသွေး ၊ လုံးဝအကြည်
Download Movie » http://www.malaysiaonlineradiomedia.com/2014/07/conquering-demons-2013-china-movie.html
China Movie , Movie » http://www.malaysiaonlineradiomedia.com/2014/07/conquering-demons-2013-china-movie.html
Download ဆွဲပြီးသား full movie ကြည့်ချင်ရင်တော့ okkala နိုင်ငံခြား ဗီဒီယို ဇာတ်ကားများထဲတွင် ၀င်ရောက်ကြည့်ရှု့နိုင်ပါသည်
Posted by okkala net at 5:53 AM No comments: Links to this post
Posted by okkala net at 5:36 AM No comments: Links to this post
သက်မဲ့ဘ၀ (လူမင်း + မေမြင့်မိုရ် + အိန္ဒြာကျော်ဇင်)
Full Movie ကို okkala မြန်မာ ဗီဒီယို ဇာတ်ကားများထဲတွင် ၀င်ရောက်ကြည့်ရှု့နိုင်ပါသည်
Posted by okkala net at 1:28 AM No comments: Links to this post
ဖြစ်ရပ်မှန် သရဲကား ဇာတ်လမ်းပါ
Full Movie ကို okkala နိုင်ငံခြား ဇာတ်ကားများထဲတွင် ၀င်ရောက်ကြည့်ရှု့နိုင်ပါသည်
Posted by okkala net at 11:06 PM No comments: Links to this post
La Galaxy0-7Manchester United ( Friendly Cup ) Full Highlight
Download ဆွဲပြီးသား ကြည့်လို့သူ များ OKKALA အင်တာနက်ဆိုင် okkala sport channel ထဲတွင် ၀င်ရောက်ကြည့်ရှု့နိုင်ပါသည်
Posted by okkala net at 10:56 PM No comments: Links to this post
ဒါရိုက်တာ ရင် ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ နောက်ဆုံးထွက် ကိုရီးယားဇာတ်ကြမ်းကားပါ
full movie ကိုတော့ okkala နိုင်ငံခြား ဗီဒီယို ဇာတ်ကားများထဲတွင် ၀င်ရောက်ကြည့်ရှု့နိုင်ပါသည်
Posted by okkala net at 9:17 PM No comments: Links to this post
[Full HD] (인간중독) Obsessed, (2014 예고편) - Korean Movie
ကိုရီးယားမင်းသား ဂျွန်စော သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ နောက်ဆုံးထွက် ဇာတ်ကားပါ..Family ကြည့်ရန် တော့ မသင့်တော်ပါဘူး 18+ ပါ...full movie ကိုတော့ okkala နိုင်ငံခြား ဗီဒီယို ဇာတ်ကားများထဲတွင် ၀င်ရောက်ကြည့်ရှု့နိုင်ပါသည်
Posted by okkala net at 9:13 PM No comments: Links to this post
နောက်ဆုံးထွက် Hollywood သရဲကား (မှန်ထဲမှ ထွက်လာသည့်
ကြောက်စရာကောင်းသည့် ဇာတ်ဝင်ခန်းများနဲ့ သရဲကား ကြိုက်သူများအတွက်
full movie ကို okkala နိုင်ငံခြား ဗီဒီယို ဇာတ်ကားများထဲတွင် ၀င်ရောက်ကြည့်ရှု့နိုင်ပါသည်
Posted by okkala net at 6:47 AM No comments: Links to this post
“အစ္စရေးတို့၏ Iron Dome “သံကွန်ချာအမိုး” ဒုံးခွင်းဒုံးစနစ်” အစ္စရေးတပ်မတော်သည် ဂါဇာမှ ပစ်ခတ်သည့် ရော့ကတ်များ လူနေထူထပ်သည့် မြို့ကြီးများအား မထိခိုက် စေရန် Iron Dome ဒုံးခွင်းဒုံးခွင်း စနစ်ဖြင့် ကြားဖြတ်ပစ်ချ ကာကွယ်လျက် ရှိသည်။ “သံကွန်ချာအမိုး” Iron Dome ဟု အမည်မှည့်ခေါ်ထားသော ဒုံးခွင်းဒုံးစနစ်သည် ဂါဇာဒေသမှ ပစ်လွှတ်လိုက်သော ရော့ကတ်များကို ကာကွယ်ရာတွင် ယမန်နေ့ကအထိရာနှင့်ချီသော ရော့ကက်များကို ကြားဖြတ်ပစ်ချပြီး ဂျေရုဆလင်၊ တဲလ် အဗစ်နှင့် အခြားမြို့ကြီးများကို ရော့ကတ် များ ကျရောက်ပေါက်ကွဲခြင်း မရှိအောင် ကာကွယ်ပေးနိုင်ခဲ့သည်ဟု အစ္စရေး ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနက ပြောကြားခဲ့သည်။ အစ္စရေးတပ်မတော်သည် လူနေထူထပ်သည့်ဒေသများကို ဦးတည်လာသည့် ရော့ကတ်များကိုသာ Iron Dome စနစ်ဖြင့် ပစ်ချခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး လူမရှိသည့်နေရာများကို ဦးတည်လာသည့် ရော့ကတ်များကို ပစ်ချခဲ့ခြင်း မလုပ်ခဲ့ပါ။ Iron Dome စနစ်သည် ရော့ကတ်များ ပစ်မှတ်ကို မထိမှန်မီ ဒုံးခွင်းဒုံးဖြင့် လေထဲတွင် ပစ်ခတ် ဖျက်ဆီးခြင်းဖြစ်သည်။ Iron Dome တပ်ဖွဲတစ်ခွဲလျှင် ပစ်ခတ်မှုထိန်းချုပ်ရေး ရေဒါတစ်ခုနှင့် အလွယ်တကူရွေ့ပြောင်းနိုင်သော ဒုံးပစ်လောင်ချာများ ပါဝင်ပါသည်။ Iron Dome စနစ်ကို အလွယ်တကူရွေ့ပြောင်းနိုင်ပြီး ရွေ့ပြောင်းနေရာ ချရန် နာရီအနည်းငယ်သာ ကြာပါသည်။ Iron Dome စနစ်တွင် ပါရှိသည့်ဒုံးများသည် ၁၀ ပေခန့်ရှည်ပြီး အချင်း ၆ လက်မခန့်ရှိ၍ အလေးချိန် ၁၉၈ ပေါင်ရှိကာ ၂၄ ပေါင်ရှိ သော ခွင်းကျည်ထိပ်ဖူး တပ်ဆင်ထားကြောင်း လုံခြုံရေး လေ့လာသည့် အဖွဲ့ဖြစ်သော IHS Jane's က ၂၀၁၂ တွင် ပြောခဲ့သည်။ ပစ်ခတ်နိုင်သော တာဝေးမှာ ၂ မိုင်ခွဲမှ ၄၃ မိုင်အတွင်းဖြစ်သည်။ Iron Dome စနစ်သည် မည်သည့်ရာသီဥတုအခြေအနေတွင်မဆို အလုပ်လုပ်နိုင်ကာ ရော့ကတ်များစွာကို တစ်ချိန်တည်း တစ်ပြိုင်တည်း ပစ်ချနို်င်သည်ဟု ဆိုသည်။ Iron Dome စနစ်ကို ၂၀၀၇ ခုနှစ်တွင် စတင်တီထွင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကာ ၂၀၀၈ ၊ ၂၀၀၉ ခုနှစ်များအတွင်း စမ်းသပ်မှုများပြုလုပ်ခဲ့ပြီး ပထမဆုံးတပ်ခွဲကို အစ္စရေးတောင်ပိုင်းတွင် ၂၀၁၁ ခုနှစ်က ဖြန့်ကျက်ချထား ခဲ့သည်။ Iron Dome စနစ်သည် စတင် အသုံးပြုခဲ့သည့် ၂၀၁၁ ခုနှစ်အတွင်း ရော့ကတ်များအား အောင်မြင်စွာ ကြားဖြတ်ပစ်ချနိုင်မှုမှာ ၇၀% ရှိသည်ဟု အစ္စရေးလေတပ်၏ အဆိုအရ သိရှိရသည်။ [http://edition.cnn.com/] အစ္စရေးနိုင်ငံသည် ဤကဲ့သို့သော စစ်ရေး တိုက်ခိုက်မှုများကို ကြိုတင်မျှော်တွေးလျက် အမေရိကန် ကာကွယ်ရေးဌာနနှင့် ပူးပေါင်းကာ လေဆာရောင်ခြည်သုံးဒုံးခွင်းဒုံးစနစ်ကို သုတေသနပြု အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ခဲ့သော်လည်း အမေရိကန်ဘက်မှ ဘတ်ဂျက် ကန့်သတ်ချက်များ အရ အဆိုပါစီမံကိန်း ရပ်ဆိုင်းခဲ့ရသည်။ ထိုသို့ ရပ်ဆိုင်းခဲ့ရသော အချိန်တွင် ဟဇ်ဘိုလာ ပြောက်ကျားတပ်ဖွဲ့များ၏ ရော့ကက်မိုးနှင့် တွေ့ကြုံရင်ဆိုင်ခဲ့ရပြီး များစွာ အထိနာခဲ့ရသည်။ နေရာပေါင်းစုံမှ ရော့ကက်မျိုးစုံ ဒလစပ်ပစ်ခွင်း၍ ဒုံးကျည်မိုးရွာချခဲ့သော ဟဇ်ဘိုလာတို့၏ တိုက်ခိုက်မှုကြောင့် အစ္စရေးပြည်သူများနှင့် အရပ်ဘက်ပစ်မှတ်များ ထိခိုက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရကာ အစ္စရေးတပ်မတော် သိက္ခာကျ နာမည်ပျက်ခဲ့ရသည်။ ဟဇ်ဘိုလာစစ်ပွဲအလွန် အစ္စရေးတပ်မတော် အနေဖြင့် နေရာစုံမှ မိုးရွာချသလို ရော့ကက်များ ပစ်ခွင်းလာမည့် အန္တရာယ်ကို ကြိုတင် မျှော်မှန်း၍ ဤ “သံကွန်ချာအမိုး” Iron Dome ဒုံးခွင်းဒုံးစနစ်ကို အကောင်အထည်ဖော်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ ကုန်ကျစရိတ်သက်သာပြီး မိမိနိုင်ငံ၊ မိမိပြည်သူများကို ထိရောက်အောင်မြင်စွာ အကာအကွယ် ပေးနိုင်ကြောင်း လက်တွေ့ပြသနေပြီ ဖြစ်သော “သံကွန်ချာအမိုး” Iron Dome ၏ သရုပ်ဖော် ဗီဒီယို ဖိုင်အား စစ်မှုရေးရာနှင့် စစ်ဘက်နည်းပညာ စိတ်ဝင်စားသူများ သိရှိနိုင်ရန် မျှဝေလိုက်ရခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ Hmuu Zaw
Posted by okkala net at 4:18 AM No comments: Links to this post
ဒါကတော့ နာမည်ကြီး All of Me ဆိုတဲ့ သီချင်းပါ။
John Legend ရဲ့ ၂ဝ၁၃ ခုနှစ်က အမေရိကားမှာ ထွက်ခဲ့တဲ့ Love in the Future အမည်ရ တေးစီးရီးထဲက R&B သီချင်းကောင်းတပုဒ်ဖြစ်ပါတယ်။
၂၀၁၄ ခုနှစ်မေလ ၁၆ ရက်နေ့က
Billboard Hot 100 စာရင်းဝင်ဖြစ်လာခဲ့ပြီး ဗြိတိန်နဲ့ နယူးဇီလန်တို့မှာ
နံပတ် ၂ နေရာရှိပြီး သြစတြေးလျ၊ ကနေဒါ၊ အိုင်ယာလန်၊ ပေါ်တူဂီ၊ ဆွီဒင်၊
ဆွစ်ဇာလန်နဲ့ နယ်သာလန်တို့ မှာ နံပတ် ၁ အဆင့်ချိန်တဲ့
All of Me သီချင်းကို အခု
သီဆိုထားသူကတော့ Luciana Zogbi ဆိုတဲ့ မိန်းကလေးပါ။ သူ့ရဲ့ ယူကျုကနေ
ဒီသီချင်းကို ၂ဝ၁၄ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ ၉ ရက်နေ့က တင်ခဲ့တာမှာ အခုဆို
ကြည့်ရှုကြိမ်ရေပေါင်း ၈ သန်းနီးပါး ရှိနေပါပြီ။ သူ့ရဲ့ ဒီသီချင်းလေးဟာ
ယူကျုကို ကောင်းကောင်း ကြည့်လို့မရတာကြောင့် သူ့ရဲ့ သီချင်း ဆိုထားတာအပေါ်
အပြည့်အဝ ခံစားလို့ရမယ် တော့ မထင်ပါဘူး။
အင်တာနက် ကော်နက်ရှင် ကောင်းရင်တော့ ဒီသီချင်းကို အပြည့်အဝ ခံစားနားဆင်လို့ ရနိုင်ပါလိမ့်မယ်။
Posted by okkala net at 11:38 PM No comments: Links to this post
ဗလကျောက်ကျော ပန်းကန် လေးချပ် ( ဖြိုးငွေစိုး + သင်ဇာဝင့်ကျော် ) ဟာသကား
full movie ကို okkala မြန်မာဗီဒီယို ဇာတ်ကားများထဲတွင် ၀င်ရောက်ကြည့်ရှု့နိုင်ပါသည်
ဒီဆိုက်သည် ကျွန်တော်တို့ OKKALA အင်တာနက်ဆိုင်တွင်တင်ထားသော Movie , Ebook, Ph software app , Game များကို အလွယ်တကူ ရှာဖွေနိုင်စေရန်အတွက်သာဖြစ်ပါသည်။
Posted by okkala net at 1:38 AM No comments: Links to this post
ခေသူမဟုတ် ( အောင်ရဲလင်း + နန်းစုဦး + ထွန်းအိန္ဒြာဗိုလ်)
Posted by okkala net at 1:13 AM No comments: Links to this post
ဈေးကောင်းရတဲ့ အုန်းဆီ အလွယ်တကူလုပ်နည်း……
Posted by okkala net at 12:59 AM No comments: Links to this post
မြန်မာပြည်မှာ သရဲကား ကြည့်ပြီး ရယ်နိုင်ပါပြီ XD hehe
အံ့သြဖွယ် ဇာတ်ကားနာမည် ၃ နာရီ ၇ မိနစ်ဇာတ်ကားဟာ ဟောလိဝုဒ်နာမည်ကြီး " The Conjuring" ကို တိုက်ရိုက်ကူးချထားတာတွေ့ ရပါတယ်။
အခုဆိုရင် သရဲကားကြည့်ပြီး ကြောက်လို့ ....အဲ ရယ်လို့ ရပါပြီ
Posted by okkala net at 12:27 AM No comments: Links to this post
၉ နှစ်သားနဲ့ ၆၂ နှစ်သူတို့ရဲ့ ဒုတိယမြောက် မင်္ဂလာလက်ထပ်ပွဲ
သူ့အသက် ၈ နှစ်၊ မနှစ် ( ၂ဝ၁၃ ခုနှစ် ) တုန်းကလည်း အခု သတို့သား Saneie Masilela ဟာ အဲဒီတုန်း က အသက် ၆၁ နှစ်ရှိတဲ့ အခု သတို့သမီး Helen Shabangu နဲ့ လက်ထပ်ခဲ့ဖူးပါတယ်။ ဒါကလည်း ကွယ်လွန်သွားပြီး တစ္ဆေဖြစ်နေကြတဲ့ ဘိုးဘွားတွေက သူ့ကို ပြောလို့ လက်ထပ်ခဲ့ရတာပါတဲ့။
အခုတော့ သူ့အသက် ၉ နှစ်မှာလည်း ဒီ ၆၂ နှစ်ရှိသွားပြီဖြစ်တဲ့ အမျိုးသမီးနဲ့ ထပ်ပြီး ဒုတိယ အကြိမ် လက်ထပ်ပွဲကို အခု ၂ဝ၁၄ ခုနှစ်မှာ ထပ်ကျင်းပကြတာပါ။ ။
Saneie Masilela ရဲ့ မိခင် Patience Masilela က အသက် ၄၆ ရှိပါတယ်။ တကယ်တော့ ၉ နှစ်သား သတို့သားရဲ့ အဘိုး ဖြစ်သူ Saneie က ဟယ်လင်ကို ချစ်တာကြောင့် ဟယ်လင်ကို လက်ထပ်ဖို့ အခုလိုဖြစ် လာရတာပါတဲ့။
အခုလို မင်္ဂလာ လက်ထပ်ပွဲ လုပ်ပေးလိုက်လို့ ကွယ်လွန်သူ ဘိုးဘွားတွေအနေနဲ့ စိတ်ပျော်ရွှင်တယ်လို့ သူတို့က ခံယူကြတယ်လို့ သိရပါတယ်။ အခုလို လုပ်ကြလို့လည်း မိသားစု မှာ ပြဿနာ မရှိပါဘူးလို့ သတို့သားရဲ့ မိခင်က ပြောတယ်။
မင်္ဂလာပွဲမှာ ထုံးစံအတိုင်း သတို့သား၊ သတို့သမီး ဝတ်စုံပြည့်ဝတ်ထားပြီး သတို့သမီး၊ သတို့သား အရံတွေနဲ့ ပန်းကျဲသူ တွေ နောက်လိုက်လာကြရင်း သတို့သားနဲ့ သတို့သမီးတို့က နမ်းကြတယ်။
မင်္ဂလာပွဲလည်း ပြီးရော သတို့သားက အသက် ၆၂ နှစ် အရွယ် ဟယ်လင်နဲ့ လက်ထပ်ရတာ သူက ပျော်ရွှင် တယ်လို့ ပြောပြီး ကျောင်းသွားမယ်လို့ ဆိုတယ်။ စာကြိုးစားမယ်တဲ့။
၉ နှစ်သား သတို့သားက သူအရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါ သူချစ်တဲ့ သူနဲ့ သက်တူရွယ်တူ မိန်းကလေးကို လက်ထပ်မှာလို့ ပြောတယ်။ အခုတော့ ၉ နှစ်သားနဲ့ ၆၂ နှစ် အမျိုးသမီးတို့ဟာ အချိန်ပြည် အတူလည်း မနေကြပါဘူးတဲ့။
အသက် ၆၂ နှစ်အရွယ် သတို့သမီး ဟယ်လင်ကလည်း မနှစ်က အဝတ်အစားကိုပဲ အခု မင်္ဂလာပွဲမှာ ဝတ်ဆင်ခဲ့တာပါတဲ့။ သူ့ကို ၉ နှစ်သားလေးက လက်ထပ်ဖို့ ရွေးချယ်ခဲ့တာကို အရမ်းပျော်တာပဲတဲ့။ အခုလို မင်္ဂလာဆောင်ခဲ့တာကြောင့် ကွယ်လွန်သွားကြတဲ့ ဘိုးဘွားတွေ ပျော်အောင် လုပ်ပေးတာ ဖြစ်ပြီး သူ့မိသားစု ကလည်း အကူအညီပေးပါသတဲ့။
တောင်အာဖရိကရဲ့ ယုံကြည်မှုကြောင့် ဖြစ်လာတဲ့ ထူးခြားတဲ့ မင်္ဂလာပွဲအကြောင်း ဗွီဒီယိုမှတ်တမ်းကို လည်း အောက်မှာ ကြည့်နိုင်ပါတယ်။
Posted by okkala net at 11:27 PM No comments: Links to this post
♪ 18+ Sexy App , Game , Movie များကို Free ရယူနိုင်တဲ့ Market - MiKandi v4.0.5 ♫
Free Market လေးတစ်ခုရထားလို့ပြန်ပြီးမျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။ အခု Market လေးကတော့ Play Store တို့ 1Mobile တို့လိုမျိုး Application တွေကို Free Download ရယူနိုင်တဲ့ Market မျိုးပါ။ ဒါပေမယ့် 18+ နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ App , Game , Movie , Live wallpaper , Movie Downloader စတာတွေသီးသန့်ရှိတဲ့ Market ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလောက်ဆို သဘောပေါက်ကြလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဗျာ။ Android OS 2.1 နှင့် အထက်ရှိတဲ့ဖုန်းများမှာအသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
အောင်ပါလင့် မှ ဒေါင်းလုပ် ဆွဲနိုင်ပါသည်
ဒေါင်းရမှာ ပျင်းနေရင် okkala phone software & game ထဲတွင် အလွယ်တကူ ၀င်ရောက်ရယူနိုင်ပါသည်
Posted by okkala net at 4:32 AM No comments: Links to this post
ဒီ Android APK အား 18 နှစ်ပြည့် ပြီးသူများသာ ဒေါင်းယူပါခင်ဗျာ
ဘာညာဘာညာ တွေ ပါပါတယ် သဘောက်ပေါက်တယ်နော် ..မကြိုက်လျှင်မဒေါင်းပါနဲ့
Posted by okkala net at 1:43 AM No comments: Links to this post
အာဇာနည်ခေါင်းဆောင်တွေကျဆုံးခဲ့ချိန် င်္နနက် ၁၀း၃၇ မှာ ကားတွေရပ်ပြီး ဟွန်းတီးဂါရ၀ပြုခဲ့ကြတဲ့ ဗီဒီယိုဖိုင်ပါ။
Posted by okkala net at 1:12 AM No comments: Links to this post
MH 17 လေယာဉ် ပျက်မကျခင် နောက်ဆုံး မြင်ကွင်း ရုပ်သံ
ပစ်ချခံလိုက်ရတဲ့ မလေးရှားလေကြောင်းလိုင်း MH 17 လေယာဉ်ပေါ်ပါ ခရီးသည် တဦးက နယ်သာလန်
နိုင်ငံ အမ်စတာ ဒမ် လေဆိပ်က မထွက်ခွာခင် လေယာဉ်ပေါ် က မြင်ကွင်းကို ဗွီဒီယို ရိုက်ပြီး အွန်လိုင်းပေါ် တင်ထားခဲ့ပါတယ်။
တနေ့က ယူကရိန်း လေပိုင်နက်ထဲမှာ ရုရှားလိုလားသူ သူပုန်တွေက မြေပြင်နဲ့ ဝေဟင်ပစ် ဒုံးကျည်နဲ့ ပစ်ချတယ်လို့ အများက ပြောဆို စွပ်စွဲနေကြပါတယ်။
အခုတော့ အဲဒီ ဗီဒီယို မူရင်းကို ယူကျုကတဆင့် ဖော်ပြလာတော့ လူအများကလည်း စိတ်ဝင်စားနေကြ ပါတယ်။
ဗွီဒီယိုမှာ ပြသထားတာက ခရီးသည်တဦးက သွားမည့် ခရီးစဉ်အကြောင်းပြောပြီး လေယာဉ်ပေါ်ပါ အခြား ခရီးသည်တချို့က ခရီးဆောင်အိတ်တွေကို လေယာဉ်ခရီးဆောင်အိတ်များထည့်ရာ ထားသိုနေကြတာ မြင်
တွေ့ရ သလို ခရီးသည်တချို့ရဲ့ လှုပ်ရှားမှုကိုလည်း မြင်တွေ့ရပါတယ်။
အချိန်အားဖြင့် မိနစ်ပိုင်း သာရှိပေမယ့် မထင်မှတ်ပဲ ပျက်ကျသေးဆုံးသွားသူတွေရဲ့ နောက်ဆုံး အသက်ရှင်လျှင် မြင်တွေ့ရတဲ့ မြင်ကွင်းတချို့မို့ ၀မ်းနည်းစရာ ဖြစ်ရပါတယ်လို့ ကွန်မန့်ပေးသူတွေ က ရေးကြပါတယ်။
Posted by okkala net at 11:55 PM No comments: Links to this post
င်္Full Movie ကိုတော့ OKKALA နိုင်ငံခြား ဗီဒီယို ဇာတ်ကားများထဲတွင် ၀င်ရောက်ကြည့်ရှု့နိုင်ပါသည်
Posted by okkala net at 9:06 PM No comments: Links to this post
အခုတော့ Trailer ကြည့်ထားပါဦး Full Movie ထွက်လာရင် OKKALA မှာ တင်ပေးထားပါမယ်
Posted by okkala net at 4:44 AM No comments: Links to this post
Posted by okkala net at 1:49 AM No comments: Links to this post
မလေးရှားနိုင်ငံက MH17 လေယာဉ် မနေ့ညက ယူကရိန်းမှာ ပစ်ချခံလိုက်ရပါတယ် ...လုံးဝစိတ်မကောင်းပါဘူး
Posted by okkala net at 1:33 AM No comments: Links to this post
နောက်ဆုံးထွက် မြန်မာ ဇာတ်ကားသစ် အချစ်၏ ဖြားယောင်းသော နေတိုး + သက်မွန်မြင့်
OKKALA မြန်မာ ဗီဒီယို ဇာတ်ကားများထဲတွင် ၀င်ရောက်ကြည့်ရှု့နိုင်ပါသည်
Posted by okkala net at 5:00 AM No comments: Links to this post
ယနေ့ထွက် မြန်မာ ဇာတ်ကား ပုစ္ဆာ ဆန်သော တစ္ဆေမလေ;( နေမင်း ၊ ခင်ဝင့်ဝါ ၊ စုမြတ်နိုးဦ)
Posted by okkala net at 4:56 AM No comments: Links to this post
နောက်ဆုံးထွက် မြန်မာကားသစ် ( ၁၂ နာရီ သတို့သား ) နေတိုး + သက်မွန်မြင့် + ၀ါဆိုမိုးဦး
Posted by okkala net at 4:51 AM No comments: Links to this post
ယနေ့ထွက် မြန်မာ ဇာတ်ကား ငါရဲ့နင် ( အောင်ရဲလင်း + သင်ဇာဝင့်ကျော်)
OKKALA မြန်မာ ဗီဒီယို ဇာတ်ကားများထဲတွင် ၀င်ရောက်ကြည့်ရှု့နိုင်ပါသည်
Posted by okkala net at 4:45 AM No comments: Links to this post
နောက်ဆုံးထွက် မြန်မာကားသစ် မိတကွဲ ဖတကွဲ ( လူမင်း + အိချောပို)
Posted by okkala net at 4:42 AM No comments: Links to this post
နောက်ဆုံးထွက် မြန်မာ ဇာတ်ကား အဖေ့စကား ( မြင့်မြတ် + သင်ဇာနွယ်ဝင်း)
OKKALA မြန်မာ ဗီဒီယို ဇာတ်ကားများထဲတွင် ၀င်ရောက်ကြည့်ရှု့နိင်ပါသည်
Posted by okkala net at 4:39 AM No comments: Links to this post
နောက်ဆုံးထွက်မြန်မာ ကားသစ် အဆိပ်ငွေကြေး ( ကောင်းပြည့် + ဖွေးဖွေး)
Posted by okkala net at 4:37 AM No comments: Links to this post
ယနေ့ထွက် မြန်မာဇာတ်ကားသစ် ( ရည်းစားဦး ကျိန်စာ) နေတိုး + သက်မွန်မြင့် + ဆန်းထွဋ်
OKKALA မြန်မာ ဗီဒီယို ဇာတ်ကားများထဲတွင် ၀င်ရောက်ကြည့်ရှု့နိုင်ပါသည်
Posted by okkala net at 4:35 AM No comments: Links to this post
နောက်ဆုံးထွက် မြန်မာ ဇာတ်ကားသစ် ဂျင်ဂျင်လည်( အောင်ရဲလင်း + စံရတီမိုးမြင့် + စိုးမြတ်သူဇာ)
Posted by okkala net at 4:30 AM No comments: Links to this post
ယနေ့ထွက် မြန်မာကားသစ် ချစ်တယ် မုန်းတယ် ၁၅၀၀ ဖုန်းရယ်( ကျော်ရဲအောင် + စိုးမြတ်သူဇာ)
Posted by okkala net at 4:26 AM No comments: Links to this post
အမေရိကန် အထက်တန်း ကျောင်းသား ၃ ယောက် … မိဘတွေ လစ်တုန်း Birthday Party
ကျင်းပရာကနေ တဖြည်းဖြည်း နဲ့ လူများလာပြီး နောက်ဆုံး
ရဲတွေပါလာရောက်ထိမ်းသိမ်းရတဲ့ အထိဖြစ်သွားတဲ့ Fancy ဇာတ်လမ်းလေးပါ...
အနောက်တိုင်းကျောင်းသား Fancy ဇာတ်ကားတွေရဲ့ ထုံးစံအတိုင်း Family နဲ့ကြည့်ဖို့မသင့်တဲ့ ဇာတ်ကားပါ..
အနောက်တိုင်းယဉ်ကျေးမှု နဲ့ ခံယူချက်တွေကို တစ်စိတ်တစ်ဒေသ တွေ့မြင်ရမှာပါ...
Full Movie ကိုတော့ okkala နိုင်ငံခြား ဇာတ်ကားများထဲတွင် ၀င်ရောက်ကြည့်ရှု့နိုင်ပါသည်
Posted by okkala net at 3:27 AM No comments: Links to this post
MC Zay YE - EP (2014) mini album
၀၂။ အဆိပ်တိုက်ပွဲ (Feat. ပိုပို)
အောက်ပါလင့် များ တွင် ဒေါင်းလုပ် ရယူနိုင်ပါပြီ
Posted by okkala net at 6:33 PM No comments: Links to this post
Posted by okkala net at 4:31 AM No comments: Links to this post
6. မိတ်ကပ်မကြိုက်သော သီချင်းများ
9. ဒုခိတ ဒုက္ခ
Posted by okkala net at 4:30 AM3comments: Links to this post
okkala music video များထဲတွင် ၀င်ရောက်နားဆင်နိုင်ပါသည်။
အခုတလော အရမ်းနာမည်ကြီးနေတဲ့ နီနီခင်ဇော် ရဲ့ မျှော်လင့်ချက် တစုံတရာ သီချင်းကို တင်ပေးလိုက်ပါတယ်
Posted by okkala net at 1:45 AM No comments: Links to this post
F4 ချစ်သူများအတွက် မြန်မာ F4 ကားပါ (F4 ဆိုလို့ မင်းသားချောတွေကို ဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူး ဇာတ်ကားနာမည်က အရူး ၄ ယောက်တဲ့ ) နေတိုး..ထွန်းထွန်း..ကျော်ကျော်ဗိုလ်...မင်းခ..မိုးယုစံ...ဖူးစုံ တို့ ပါဝင် သရုပ်ဆောင်ထားပါတယ် ဟာသကားလေးပါ နမူနာ တင်ပေးထားပါတယ် full movie ကို okkala မြန်မာ ဗီဒီယို ဇာတ်ကားများထဲတွင် ၀င်ရောက်ကြည့်ရှု့နိုင်ပါသည်
Posted by okkala net at 2:45 AM No comments: Links to this post
Gymသွားမဆော့ပဲ အိမ်မှာပဲ ကိရိယာလွတ်ကစားချင်သူများအတွက်
Posted by okkala net at 10:16 PM No comments: Links to this post
မြန်မာ စပါးကြီးမြွေခေါ် ကချင်သားလေး အောင်လဆိုင်းနဲ့ တွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်း
Posted by okkala net at 5:07 AM No comments: Links to this post
အုန်းသီးကို မခွဲပဲ အုန်းရည် ထုတ်ယူနည်းပါ။ လုပ်အားသက်သာစေဖို့ တီထွင်ကြံဆ နည်းလမ်းရဆိုသလို အကျိုးရှိရှိ အသုံးပြုဖို့ ကောင်းတဲ့ ဖန်တီးမှုတခုပါ။
Posted by okkala net at 11:59 PM No comments: Links to this post
မိစန္ဒီ ပစ်တိုင်းထောင် The Whole Album ရပါပြီ
credit to UDMA
Posted by okkala net at 4:27 AM No comments: Links to this post
စမောလ်တို့ရွာ ( 18+ အမျိုးသားများသာ ဖတ်ရန် )
သူ.နံမည်ရင်းက စံပေါ မြို.ရောက်တော. စမောလ်ဆိုပြီး နံမည်ပြောင်းလိုက်တယ်။ လူကဖြူဖြူသေးသေး အရပ်က လေးပေလေးလက်မ ဘဲရှိတယ်။ မောင်နစ်မ ငါး...
ညတာရှည်မဲ့ ည ( အချစ်ဝတ္ထု ) 18 +
ညတာရှည်မဲ့ ည ... ဆောင်း တွင်း မို့ စောင် ခြုံ ပြီး ကွေး လို့ကောင်း ချိန် နာ ရီ နှိုး စက် က အ လိုက် မ သိ ထ မြည် သည်..။ ဖေ ၀င်း မောင် အိပ် ရ...
ကိုယ်တွေ့ အတွေ့အကြုံများ ဇာတ်လမ်းများ စုစည်းမှု ( Credit to Uploader ) ♥♥♥♥
ကျွန်တော်ရဲ့အဖြစ်မှန်ပါ ပထမဆုံးရေသားဘူးတဲ့စာဖြစ်သောကြောင့် စာဖတ်ရထောက်တာတို့စာလုံးပေါင်းမှားတာတို့ အားသီးခံဖတ်ရှု့စေချင်ပါတယ်။ အရေးအသာ...
ရာဇ၀င်ထဲက ဗမာ့ အချစ်လူကြမ်း ငထော ကြီး ( အချစ်ဝထ္တု ) ♥♥♥
၁၈၈၅ ခုနှစ် တွင် မြန်မာ ဘုရင်သီပေါမင်းနဲ့မိဘုရား ကို နန်းချပြီး နယ်ချဲ့အင်္ဂလိပ်တို့ မြန်မာနိုင်ငံ တခုလုံး ကို သိမ်းပိုက် ခဲ့ကြ သည်..။ မန...
သူ့ကြောင့်ပေါ့ ( အချစ်ဝတ္တု )
( ၂၁ )ရာစုမှာ မိန်းမတွေဟာ ယောကျာ်းတွေနဲ့အတူ ရင်ဘောင်တန်းပြီး အလုပ်လုပ်လာကြပါပြီ။ ဘယ်အလုပ်တွေမှာပဲကြည့်ကြည့် မိန်းမဝန်ထမ်းတွေက တောင်ပုံရာပုံ...
နိဗ္ပာန် တက် နေ တုန်း ရုတ် တရက် ဆွဲ ချ ခံ ရသ လို ပေါ့ ဆိုတဲ့ အတွေ့အကြုံ ( Credit to Uploader 18 + )
ကြုံဖူးပါတယ်ဗျို့။လက်ညှိုးလဲမရဲတရဲလေးထောင်ပါ့မယ်။ သိပ်တော့မရီနဲ့ဗျာ။ခြုံတိုးတုန်းကပေါ့။ဆော်လေးနဲ့။ တစ်ကောင်ကိုလဲစောင့်ခိုင်းထားတာ။နှမလိုးက...
PHYO PYAE SONE ( မျှော်နိုင်သမျှ မျှော် ) MP3 NEW ALBUM
သီချင်းတွေ အားလုံး ဂွတ်တယ် အကြိုက်ချင်းတူရင် ရင်ခုန်နိုင်ပါတယ် အောက်ပါလင့်တွင် တပုဒ်ချင်းဒေါင်းလုပ်ဆွဲနိုင်ပါသည် www.okkalamusicchanne...
ကင်ပေစခန်းမှ ငရဲခန်း ( အချစ်ကြမ်းကြမ်း စာအုပ် )♥♥
Perfect Partner (2011) မြန်မာစာတန်းထိုး(18+) - ကောင်းလားမကောင်းလား သိချင်ရင် ဒေါင်းကြည့်လိုက်ပါ
အောက်ပါလင့်တွင် ဒေါင်းလုပ်ကြည့်ရှု့နိုင်ပါသည် https://my.pcloud.com/publink/show?code=XZvphVZKOacsXhTfyB0fpUdAdz9J4jp4Bz...
Copyright © OKKALA STORE | Designed for r4 - r4i gold, r4 3ds, r4 sdhc